Mitady mpitady asa. Ny vehivavy breziliana, dia manasa ny olona rehetra manerana izao tontolo izao - Ny Lahatsary Amin'ny Chat Meksika
Mitady mpitady asa. Ny vehivavy breziliana, dia manasa ny olona rehetra manerana izao tontolo izao
Ny Breziliana Mpanjaka-ponenana an-tanàna no Cordeiro nikiakiaka ilay mpiadina eo amin'ny AterinetoKandidà dia niverina tany izay nampanantenaina mba tsy hitsabaka amin'ny ny vehivavy, ny hetsiky ny fiaraha-monina, ary tsy mba manao fitarainana manohitra ny zanak io fanambadiana io. Ny tanàna ny vehivavy toy Cordeiro tena fiainana mitoka-monina ny fiainana, ary tsikelikely teny iray karazana fomba fiainana izay raha ny marina dia inona izany. Ny vehivavy breziliana asao ny olona iray ho any an-tanàna ianao no cordeira, izay hita ao Atsimo-Atsinanan ny firenena. Lahy, rehefa tonga ny taona, dia naniraka tany amin'ny tanàna hafa, ary nanambady ny mponina maneho ny vadiny afa-tsy amin'ny faran'ny herinandro. Amin'io lafiny io, ny momba ireo solontenan'ny ara-drariny ny firaisana ara-nofo be taona hatramin'ny roa-polo ny dimy amby telo-polo taona, ny fifaninanana dia efa nanambara ho an'ny mpiadina avy manerana izao tontolo izao. Tsy mahazatra ny tanàna niseho tao amin'ny faritra Atsimo-Atsinanan'i Brezila tamin'ity taonjato ity. Izany dia mifototra amin'ny Maria de Lima, izay voaroaka tao amin'ny fianakaviana noho ny ahiahy ho namadika ny vadiny. Izy no nanorina ny vehivavy ponenana izay ankizivavy tsy afaka miaina raha tsy misy tononiny ny olona sy ny fanjakan-Dehilahy ny fiaraha-monina. Vokatr'izany, Maria sy ny taranany no excommunicated avy amin'ny Fiangonana amin'ny taranaka fahadimy. Ny tanàna ny vehivavy, araka ny hoe ao cordeira, dia niova tsikelikely tao Brezila, izay karazana ny fomba fiainany efa niforona, izay raha ny marina ny matriarchy. Ireo vehivavy mihazakazaka ny tanàna sy ny toeram-piompiana Ho azy ireo mba hiaraka hanandrana ny vintana, ilaina ny mieritreritra momba izany. Izy ireo tsy maintsy manaiky ny ankehitriny fitsipika Ny mpitandrina ny Fiangonana Evanjelika Pereira naka vady avy amin'ny isan'ny mponina ao an-toerana. Izy no nikarakara ny tenany ao amin'ny Fiangonana an-tanàna, ary niezaka mba hametraka lalàna henjana ny nanonona ny fivavahana. Indrindra indrindra, ny vehivavy dia voarara ho nanapaka ny volony, misotro toaka, na mihaino mozika ny mozika sy ny fampiasana ny karazana fanabeazana aizana atelina am-bava. Taorian'ny nahafatesany Pereyrera, Cordeiro vehivavy nanapa-kevitra na oviana na oviana indray mba hamela ny olona mba hibaiko ny fomba velona, manoratra Cordeiro.
Ny Breziliana toeram-ponenana an-tanàna ny hanaovana Cordeiro mihitsy no hirotsaka ho amin'ny fambolena, ny ankizy fanabeazana, ny fambolena sy ny asa hafa. Ny fifaninanana ho an'ny mpivady vao no nanambara nandritra ny fotoana ela Ao amin'ny fanambarana fa ireo mponina naparitaka tamin'ny alalan'ny haino aman-jery sosialy, dia mampitandrina fa ny olona rehetra dia tokony hiaina araka ny fitsipiky ny andrim-panjakana rehefa voantso izy ireo.
Kandidà izay hanolo-tena mba tsy hitsabaka amin'ny ny vehivavy, ny hetsiky ny fiaraha-monina ary ny tsy filazana avy ny zanak izany fanambadiana izany dia tokony hiverina.
Mampiaraka ao Portiogaly - Mampiaraka tranonkala ao Portiogaly
Rosjanka, po spotkaniu z którym zaginął żonaty meksykanin, opowiedziała o tym, co się stało. Aktualności - Rosja
fisoratana anarana lahatsary amin'ny chat room ny lahatsary amin'ny chat safidy olon-dehibe Mampiaraka ny fisoratana anarana maimaim-poana Ny fiarahana amin'ny chat amin'ny chat roulette amin'ny ankizivavy amin'ny chat roulette online without Mampiaraka toerana tsy misy fisoratana anarana ny lahatsary amin'ny chat room Mampiaraka ny ankizivavy maimaim-poana amin'ny aterineto ny lahatsary amin'ny chat manaitaitra free video olom-pantatra nefa tsy nisoratra anarana miaraka amin'ny ankizivavy